Saddex waxyaabood oo laga bartay kulankii furitanka ee tartanka M/Gobolleedyada iyo G/Benadir – Gool FM
Saddex waxyaabood oo laga bartay kulankii furitanka ee tartanka M/Gobolleedyada iyo G/Benadir
Kaafi December 9, 2017
(Muqdisho) 09 Dis 2017. Shalay, 08dii Nofeembar, 2017 waxaa Muqdisho, Caasimadda Soomaaliya ka furmay tartanka ugu xiisaha badan dalka ee M/Gobolleedyada iyo G/Benadir.
Ololahan sanadkan waxaa ka qeyb galaya shan M/Gobolleed iyo G/Benadir.
Ciyaartii ugu horreeysay waxaa isaga horyimi labadii dhinac ee kal hore afar dhammaadka foodda isku daray, G/Benadir iyo Jubbaland.
Kulanka waxaa ugu dambeyn 2-1 guushu ku raacday G/Benadir.
Hadaba maxaa laga bartay kulankaas?
1)….Benadir Kubadd lama imaan balse khiddad
Kulankii shalay ka dhacay gegida Benadir waxa uu ahaa mid hal jiho duullaanku ku wajahnaa (One way traffic), Benadir ma ahayn koox la soo shirtagtay ciyaar ay jecleysteen kumanaankii taageerayey.
Hase, ahaatee, waxa ay meesha ku haysay kaarto ku saleysneyd ku dhufoo ka dhaqaaq! Taas o u sahashay in ay hesho laba gool oo daba maryo ku yimi.
2)…..Jubbaland wali lama qabsan cawska macmalka ah
Xiddiggihii matalayey Jubbaland ee badi laga soo xulay Kismaayo waxa ay ahaayeen kuwo farsamo iyo xawaare badan balse kufitaan iyo simbiriirixasho isaga tag waayey! Tartankii hore ee ay kama dambeysta yimaadeen, qaar ka mida xiddigaha koxda oo u warramay barnaamijka Gool FM Show ee ka baxa Gool FM ayaa sheegay in ay culeys kala kulmen cawska macmalka ah iyaga oo u sababeeyey in xilligaas garoomo uu ku goglan yahay cawyska macmalka ah ku yaraa ama uusan ka jirin deegaanadooda. Cilladaas wey ka muuqatay shalay.
3)….Is bedel badan kama muuqan tartanka marka la bar bar dhigo karo kii sanadkii hore
Tartanka oo xiisihiisu aad u sarreeyey sanadkii hore ayaa soo jiitay guud ahaan bahda isbortiga ee dalka.
Sidoo kale waxaa ahmiyaddiisa daremay dowladda oo si gaar ah xil isaga saartay sidii uu qaab joogta ah uga qabsoomi lahaa dalka iyaga oo xaquuqa martigalinta siiyey Jubbaland…balse masuuliyaddaas kama soo bixin M/Jubbaland sababo dhaqaale darted.
Hayeeshe, Xamar ayaa loo soo celiyey taas oo ka farxisay bulshada tirade badan ee Caasimadda oo dhib kala kulmi lahaa la socodka tartanka maadama 500 oo KM oo wado ahaan iyo amaan ahaanba u suurtagasheen in ay u safraan…dabcan iyo dhaqaalaha lagu raaco diyaaradaha!
Taageerihii shalay joogay Benadir Stadium wax is bedel tayo ah kuma arag bandhigyaddii labada kooxoodba.
W/D: Mohamed Kaafi
Kulankii la wada sugayay Berito ee Derby Manchester oo halis ugu jira inuu Baaqdo!!!
Hirshabeele VS Koofur Galbeed: Kullankii labaad tartanka maamul goboleedyada oo galabta dhacaya